Spam Filters များကို အစပျိုးပေးပြီး Junk Folder ဆီသို့ လမ်းကြောင်းပေးသည့် အီးမေးလ် ဘာသာရပ်လိုင်း စကားလုံးများ Martech Zone
Spam Filters များကို အစပျိုးပေးပြီး Junk Folder ဆီသို့ လမ်းကြောင်းပေးသည့် ဘာသာရပ်စာကြောင်းများကို အီးမေးလ်ပို့ပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 30, 2022 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 30, 2022 Douglas Karr
သင့်အီးမေးလ်များကို အမှိုက်ဖိုဒါသို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခြင်းသည် အဆင်မပြေပါ... အထူးသဖြင့် သင့်အီးမေးလ်ကို ကြည့်ရှုလိုသည့် စာရင်းသွင်းသူစာရင်းကို အပြည့်အဝရွေးချယ်ပြီး ကြည့်ရှုလိုသည့် စာရင်းသွင်းသူစာရင်းကို တည်ဆောက်ရန် အလွန်ခက်ခဲသောအခါတွင် ဖြစ်သည်။ သင်၏ ပေးပို့သူ၏ ဂုဏ်သတင်းကို သက်ရောက်မှုရှိစေမည့် အကြောင်းအချက်အချို့မှာ ဝင်စာပုံးသို့ သင်ရောက်ရှိနိုင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်-
spam တိုင်ကြားမှုများအတွက် နာမည်မကောင်းသော ဒိုမိန်း သို့မဟုတ် IP လိပ်စာမှ ပေးပို့ခြင်း။
သင့်စာရင်းသွင်းသူများမှ စပမ်အဖြစ် အစီရင်ခံခြင်း။
သင့်လက်ခံသူများထံမှ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှု ညံ့ဖျင်းလာခြင်း (ဘယ်တော့မှ မဖွင့်၊ မနှိပ်ဘဲ၊ သင်၏အီးမေးလ်များကို စာရင်းသွင်းမှုမှ ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ခြင်း)။
အဆိုပါအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှပေးပို့ရန်ကုမ္ပဏီမှအီးမေးလ်ကိုခွင့်ပြုကြောင်းသေချာစေရန်သင့်လျော်သော DNS ထည့်သွင်းမှုများကိုအတည်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေမစစ်ဆေးနိုင်သည်ဖြစ်စေ။
သင်ပေးပို့သော အီးမေးလ်များတွင် အမြောက်အများ အမြောက်အများရရှိခြင်း။
သင့်အီးမေးလ်စာကိုယ်တွင် မလုံခြုံသောလင့်ခ်များ ရှိနေသည်ဖြစ်စေ (၎င်းတွင် ပုံများသို့ URL များပါ၀င်သည်)။
သင့်ပြန်ကြားရေးအီးမေးလ်လိပ်စာသည် စာတိုက်ပုံးတွင် လက်ခံသူ၏အဆက်အသွယ်များထဲတွင် ရှိနေသည်ဖြစ်စေ ၎င်းတို့ကို ဘေးကင်းစွာ ပေးပို့သူအဖြစ် အမှတ်အသားပြုထားခြင်းရှိမရှိ၊
မင်းရဲ့စကား အီးမေးလ်အကြောင်းအရာလိုင်း spammers တွေ နဲ့ အဖြစ်များပါတယ်။
သင့်အီးမေးလ်စာကိုယ်တွင် စာရင်းသွင်းခြင်းမှ ရပ်ဆိုင်းခြင်းလင့်ခ်တစ်ခု ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ နှင့် ၎င်းကို သင်ခေါ်သည့်အရာကို ပြုလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအရာကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် ဖောက်သည်များအား တစ်ခါတစ်ရံ အကြံပေးပါသည်။ ဦးစားပေး.
သင့်အီးမေးလ်ကောင် မကြာခဏဆိုသလို၊ စာသားမပါသော HTML အီးမေးလ်တစ်ခုတည်းသည် စာတိုက်ပုံးဝန်ဆောင်မှုပေးသူကို အလံပြနိုင်သည်။ အခြားအချိန်များတွင်၊ ၎င်းသည် သင့်အီးမေးလ်စာကိုယ်အတွင်းမှ စကားလုံးများ၊ လင့်ခ်များရှိ ကျောက်ဆူးစာသားနှင့် အခြားအချက်အလက်များ ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤ algorithms များကို စာတိုက်ပုံးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများမှ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းသည် လမ်းညွှန်ချက်များ၏ 100% ပြည့်မီရမည့် အမှတ်အသားစာရင်းမဟုတ်ပါ။ ဥပမာအနေဖြင့်၊ သင်၏ပြန်ကြားရေးအီးမေးလ်လိပ်စာသည် စာတိုက်ပုံးတွင် လက်ခံသူ၏အဆက်အသွယ်များထဲတွင်ရှိနေပါက၊ သင်သည် ဝင်စာပုံးသို့ အမြဲလိုလိုတွေ့လိမ့်မည်။
သင့်တွင် ကောင်းမွန်သော ဝင်စာပုံးနေရာချထားမှုနှင့် သင့်အီးမေးလ်များတွင် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများစွာရှိနေပါက၊ သင်သည် ပိုမိုပြင်းထန်သောအီးမေးလ်များကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး ညံ့ဖျင်းသော သို့မဟုတ် ငယ်ရွယ်သော နာမည်ကောင်းရှိသော ပေးပို့သူကိုဖြစ်စေသော စကားလုံးများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒီမှာ ပန်းတိုင်က သင်လိုက်တာ သိ မင်းဆီကို ရောက်သွားပြီ။ junk folder ကိုSPAM စစ်ထုတ်မှုများကို အလံပြနိုင်သည့် စကားလုံးများကို လျှော့ချရန်။
အီးမေးလ်အကြောင်းအရာလိုင်း SPAM စကားလုံးများ
သင့်တွင် ခိုင်လုံသောဂုဏ်သတင်းမရှိပါနှင့် လက်ခံသူ၏အဆက်အသွယ်များတွင် မပါဝင်ပါက၊ သင့်အီးမေးလ်များကို ချိတ်မိစေရန် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခု။ Junk ဖိုင်တွဲ နှင့် SPAM အဖြစ် ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်မှာ သင့်အီးမေးလ်အကြောင်းအရာလိုင်းတွင် သင်အသုံးပြုခဲ့သော စကားလုံးများဖြစ်သည်။ SpamAssassin သည် ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အတွက် ၎င်း၏စည်းမျဉ်းများကို ထုတ်ပြန်သည့် ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စပမ်းပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ Wiki တွင် SPAM.
ဤတွင် SpamAssassin သည်ဘာသာရပ်လိုင်းတွင်စကားလုံးများဖြင့်အသုံးပြုသောစည်းမျဉ်းများဖြစ်သည်။
ဘာသာရပ်လိုင်းအလွတ်ဖြစ်သည် (ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အလန်!)
ကြွေးမြီ၊ ကြွေးမြီ၊ တာဝန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းစသည့်စကားလုံးများပါ ၀ င်သည်။
ဘာသာရပ်လိုင်းတွင်အတိုကောက်လပါဝင်သည် (ဥပမာ - မေ)
ဘာသာရပ်လိုင်းတွင် cialis, levitra, soma, valium သို့မဟုတ် xanax ဟူသောစကားလုံးပါရှိသည်။
ဘာသာရပ်လိုင်းသည်“ Re: new” နှင့်စတင်သည်။
ဘာသာရပ်လိုင်းတွင်“ ပိုကြီးသော” ပါဝင်သည်
အကြောင်းအရာလိုင်းတွင်“ သင်အတည်ပြုသည်” သို့မဟုတ်“ အတည်ပြု” ပါရှိသည်
ဘာသာရပ်လိုင်းတွင်“ အခမဲ့” ပါရှိသည်။
အကြောင်းအရာလိုင်းတွင်“ လုံခြုံရေးအစီအမံများ” ပါရှိသည်။
ဘာသာရပ်လိုင်းတွင်“ စျေးပေါသည်” ပါရှိသည်။
ဘာသာရပ်လိုင်းတွင်“ အနိမ့်ဆုံးနှုန်း” ပါရှိသည်။
ဘာသာရပ်လိုင်းတွင်“ မြင်ခဲ့သည့်အတိုင်း” ဟူသောစကားလုံးများပါ ၀ င်သည်။
ဘာသာရပ်လိုင်းသည်ဒေါ်လာသင်္ကေတ ($) သို့မဟုတ် spammy ဖြင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာရည်ညွှန်းချက်ဖြင့်စတင်သည်။
ဘာသာရပ်လိုင်းတွင်“ သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာ” စကားလုံးများပါရှိသည်။
ဘာသာရပ်လိုင်းတွင်“ သင်၏မိသားစု” ဟူသောစကားလုံးပါရှိသည်။
ဘာသာရပ်လိုင်းတွင်“ ဆေးညွှန်းမရှိ” သို့မဟုတ်“ အွန်လိုင်းဆေးဝါး” ဟူသောစကားလုံးများပါ ၀ င်သည်။
ဘာသာရပ်လိုင်းနှင့်စတင်သည် ပြောကျသှား, "ကိုယ်အလေးချိန်", ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်သို့မဟုတ်ပေါင်ဆုံးရှုံးအကြောင်းကိုပြောသွား။
အကြောင်းအရာလိုင်းသည် ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်။
ဘာသာရပ်လိုင်းသည်“ သင်အိပ်မက်မြင်သလား”၊ “ သင်၌ရှိပါသလား”၊ “ သင်လိုချင်သလား”၊ “ သင်ချစ်ပါသလား” စသည်ဖြင့်စသည်။
အကြောင်းအရာလိုင်းတွင်အီးမေးလ်လိပ်စာ၏ပထမပိုင်းပါ ၀ င်သည် Dave@ domain.com) ။
ဘာသာရပ်လိုင်းသည်စကားလုံးများကိုရှုပ်ထွေးစေရန်သို့မဟုတ်စာလုံးပေါင်းရန်ကြိုးစားသည်။ (ဥပမာ: c1alis, x @ nax)
ဘာသာရပ်လိုင်းတွင်အင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်ဂျပန် UCE ကုဒ်ပါရှိသည်။
အကြောင်းအရာလိုင်းတွင်ကိုရီးယားမလိုလားသောအီးမေးလ် tag ပါရှိသည်။
ကျွန်ုပ်၏ရိုးသားသောအမြင်အရ၊ ဤစစ်ထုတ်ခြင်းအများစုသည် လုံးဝရယ်စရာကောင်းပြီး အီးမေးလ်ပေးပို့သူများသည် ၎င်းကို ဝင်စာပုံးထဲသို့မထည့်ရန် မကြာခဏ ပိတ်ဆို့လေ့ရှိသည်။ စားသုံးသူတိုင်းနီးပါးက သူတို့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ ရောင်းသူတွေဆီကနေ အီးမေးလ်ကို မျှော်လင့်နေတာမို့လို့ ပြောနေတာပါပဲ။ တခုခု ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်အား ပိတ်ဆို့သွားစေနိုင်သည်မှာ အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည်။ တစ်ခုခုကို အမှန်တကယ် ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲ။ အခမဲ့ စာရင်းသွင်းသူထံ? ကောင်းပြီ၊ အဲဒါကို subject line မှာမရေးပါနဲ့။
သင့်အီးမေးလ် နာမည်ကို ထူထောင်ရန် သို့မဟုတ် ရှင်းလင်းရန် အကူအညီ လိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်၏ အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီက လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်မှုအကြံပေး ဖောက်သည်များစွာအတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများတွင်-
အီးမေးလ်စာရင်းရှင်းလင်းခြင်း။ သိထားသော bounce များနှင့် တစ်ခါသုံးအီးမေးလ်လိပ်စာများကို သင့်စနစ်မှ ဖယ်ရှားကြောင်း သေချာစေရန်။
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်း အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအသစ် (ESP) ထံသို့ အိုင်ပီပူနွေး ခိုင်မာသောဂုဏ်သတင်းကို မြှင့်တင်ရန် သေချာစေသော ကမ်ပိန်းများ။
Inbox နေရာချထားမှု စမ်းသပ်ခြင်း။ သင့်ဝင်စာပုံးနှင့် အမှိုက်ဖိုင်တွဲနေရာချထားမှုကို စောင့်ကြည့်ပြီး ခြေရာခံရန်။
ဂုဏ်သိက္ခာ ပြုပြင်ခြင်း။ ပိုမိုမြင့်မားသော ဝင်စာပုံးနေရာချထားမှုအတွက် ခိုင်မာသောအီးမေးလ်ဂုဏ်သတင်းကို အရန်ထားရှိရန် ကောင်းမွန်သော အီးမေးလ်ပေးပို့သူများကို ကူညီပေးရန်။
တုံ့ပြန်နိုင်သော အီးမေးလ် နမူနာပုံစံ အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတိုင်းအတွက် ဒီဇိုင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း။
အကယ်၍ သင်သည် အနည်းဆုံး အီးမေးလ် 5,000 ကို မည်သည့်စာတိုက်ပုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံ ပေးပို့ပါက၊ သင်၏ အထွေထွေ အီးမေးလ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ပရိုဂရမ်၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် သင့်ပရိုဂရမ်ကိုပင် ကျွန်ုပ်တို့ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
စကားလုံး SPAM ၏ မူလအစ
အိုး၊ ပွဲထဲမှာ SPAM ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ဘယ်ကလာမှန်း မင်းမသိဘူး... အဲဒါက နာမည်ကြီး စည်သွတ်အသားထုတ်ကုန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Monty Python ပုံကြမ်းကနေ ထွက်လာတာ။
Tags: အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုအီးမေးလ်ပို့ပါspam filter ကိုspam filter ကိုသော့ချက်စာလုံးspam filter ကိုspam စကားလုံးများစပိန်ဘာသာရပ်လိုင်းအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဘာသာရပ်လိုင်းများ
Direct Link မှတဆင့် WordPress သို့ ယာယီဝင်ရောက်မှုပြုလုပ်နည်း
Exit Intent ဆိုတာ ဘာလဲ။ ကူးပြောင်းမှုနှုန်းများကို မြှင့်တင်ရန် ၎င်းကို မည်သို့အသုံးပြုသနည်း။